आइपिएलमा सस्तो खेलाडी हिट , मंहगो खेलाडी सुपर फ्लप - NepalTrending
आइपिएलमा सस्तो खेलाडी हिट , मंहगो खेलाडी सुपर फ्लप
NepalTrending — October 4, 2020 add comment
काठमाडौं । यूएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटअन्तर्गत शनिबार राति सम्पन्‍न खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले जीत हात पार्‍यो । प्रतियोगितामा तेस्रो जीत दर्ता गर्ने क्रममा उसले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई १८ रनले पराजित गरेको हो । शारजाहमा दिल्लीले दिएको २२९ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २१० रन मात्र बनाउन सक्यो ।
कोलकाताका लागि नितिश रानाले सर्वाधिक ५८ बनाए भने अन्त्यतिर इयान मोर्गानले ४४ तथा राहुल त्रिपाठीले ३६ रनको आक्रामक पारी खेलेको भएपनि टोलीलाई जीत दिलाउन सकेनन् । खेलमा महंगोमा किनिएका खेलाडीले खासै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेनन् । तर असाध्यै सस्तोमा किनिएका खेलाडीले भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
दिल्लीमा ऋषभ पन्त १५ करोड भारुमा किनिएका सबैभन्दा महंगा खेलाडी हुन् । उनले १७ बलमा २८ रन बनाए । हर्षल पटेल केवल २० लाख भारुमा किनिएका खेलाडी हुन् । उनी प्लेइङ इलेवनमा परेका सबैभन्दा सस्ता खेलाडी हुन् । ब्याटिङमा उनले मौका पाएका छैनन् । बलिङमा उनले ४ ओभरमा ३४ रन दिएर २ विकेट लिए ।
त्यस्तै, कलकत्ताका सबैभन्दा महंगा खेलाडी पैट कमिन्स हुन् । उनी यो सिजनमा १५.५० करोड भारु पाउँछन् । कमिन्सले ४ ओभरमा ४९ रन दिए तर एउटा पनि विकेट लिन सकेनन् । प्लेइङ्ग इलेवनमा रहेका राहुल त्रिपाठी केवल ६० लाख भारुमा किनिएका खेलाडी हुन् । उनी सबैभन्दा सस्ता खेलाडी हुन् जसले १६ बलमा ३६ रन बनाए । खेलमा उनले ३ चैका र ३ छक्का पनि हिर्काए ।
चलेन मेसीको जादु ! एल क्लासिको रियल म्याड्रिडले जित्यो, बार्सिलोना ले पराजित
सुनिल नायनले ब्याटिङमा बरुण चक्रवर्तीले बलिङमा गरे दिल्लीको पत्तासाफ, एक्लैले लिए ५ विकेट
मुम्बईका बलरसामु धोनीको टिम चेन्नाईको शर्मनाक प्रदर्शन, ११४ रनमै अल आउट
रोनाल्डोले कोरोनाले जित्न सकेनन्, बार्सिलोनाविरुद्धको खेल गुमाउने
पूर्व युवराज पारसले यसरी दिए हिमानीलाई जन्मदिनको शुभकामना
दिल्लीलाई अर्को ठलो झड्का, अमित मिश्रापछि अर्का स्टार बलर आईपिएलबाट आउट ! सन्दिपलाई फाईदा ?
नयाँ फिफा बरियतामा नेपालको स्थान थाह पाउँदा सबै चकित, शीर्ष स्थानमा बेल्जियम
कोरोना संक्रमणको १६ दिनपछि २५ वर्षीया दीपा कुँवरको नि’धन
मनिष पाण्डे चम्किदा हैदरावादको सहज जित, सन्दिपले भने कमाल देखाउन सकेनन्
डिभिलर्सले छक्का हानेको बलले सडकमा गुडिरहेको कारमा लाग्यो , शाहरुख खान समेत चकित ( हेर्नुस भिडियो )
आईपिएल स्कोर कार्ड
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितको उपचार नरोक्नु
अर्कै केटासँग सल्किएको भन्दै कुबेतमा भारतिय युवकले गरे नेपाली युवतिको ह’ त्या
खुसिको खबर ! आज कोरोना लाग्ने भन्दा कोरोनालाई जित्ने धेरै
म अरबमा छु श्रीमती अस्पतालमा छटपटाई रहेकी छिन् धेरै ब्लड चाहिन्छ रे क्रिपया सहयोग गरिदिनुहोस्
के बेफाइदा हुन्छ राम्री युवतीसँग विवाह गर्दा ? जानीराखौं